Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Caribbean » 2021 Caribbean njem nleta: A gbara aka
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Aruba Na -agbasa • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belize • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • British Virgin Islands (BVI) na -agbasa akụkọ • Caribbean • Akụkọ Cayman Islands • Ịtụ egwu • Akụkọ gbasara Dominica • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Saint Vincent na Grenadines na -agbasa akụkọ • trending Ugbu a • Ndị Turks na Caicos Breaking News • Akụkọ Virgin Islands nke US • Akụkọ dị iche iche
Mba ndị dabere na njem nlegharị anya n'ụwa gụnyere Aruba, Antigua, Barbuda, Bahamas, St. Lucia, Dominica, Grenada, Barbados, St. Vincent, na Grenadines, St. Kitts na Nevis, Jamaica, Belize, agwaetiti Cayman , na Dominican Republic (iadb.org). Maka agwaetiti ndị a, njem nlegharị anya nke mba dị iche iche bụ ọbara akụ na ụba ha wee gbasaa n'otu abalị.
Mgbe COVID tolitere isi ọjọọ ya na ụgbọ mmiri, ndị ọrụ na -ehi ụra na wiil.
Ihe gbasara njem nlegharị anya, nke enwere ike mebie ma lebara anya n'oge mmalite ya, ka enyere ohere itolite ma wakpo ụwa niile.
Ruo taa, ndị na -ahụ maka njem ụgbọ mmiri na ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya, ndị ọrụ gọọmentị na ndị ọrụ ahọpụtara na -ajụkarị iburu ọrụ maka nleghara anya ha.
Ọtụtụ n'ime ndị na-ahụ maka njem ụgbọ mmiri ma ọ bụ njem nlegharị anya enyebeghị mgbaghara maka nleghara anya ha maka eziokwu na sayensị na ụzọ ha "isi n'ime ájá" maka njikwa nke otu ha yana ọdịmma ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri.
Njem nlegharị anya dabere
The mbibi na -emebi ihe sitere na ọdịda zuru oke nke Caribbean iji mee ka ọrụ akụ na ụba ya dị iche iche na echiche myopic nke akụ nke ya. Nke a bụ otu mpaghara ụwa pere mpe nke na -eme njem nlegharị anya bụ pasent 14 nke GDP na 2019, nke kachasị na mpaghara ọ bụla. Mba LAC so na ndị kacha nwee ọgba aghara n'ụwa na ọdachi ndị na-emere onwe ha na-adị ka ihe a na-eme kwa ụbọchị kama ịtụ egwu ma ọ bụ ihe ịtụnanya. Ihe dị ọhụrụ, agbanyeghị, bụ oke ọsọ na -atụ ụjọ na ntachi obi nke coronavirus emetụtala ntọala akụ na ụba nke mpaghara ndị a.
Ịpụta na ịgha ụra nke ọma, ile ọbịa, njem, na ndị isi njem nlegharị anya bụ ndị lanarịrị ajọ ọrịa a bụzi ọrụ dị ukwuu nke ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ pụọ na nkwado ndụ na ilekọta ya na ahụike.
Dị ka onye ọ bụla na -arịa ọrịa - ọ dị mkpa ịme usoro (ugboro ugboro nwa ọhụrụ), iji pụọ n'ọrịa gaa n'ịdị mma. Ọ bụrụ na ndị ọrịa nwere ihu ọma, ndị enyi, ezinụlọ, na ezigbo ndụmọdụ sitere na pundits Google n'ịntanetị ga -enye ụzọ maka mgbake. Ndị ọrịa nwere ike ịsụ ngọngọ wee laghachi azụ ugboro ole na ole, mana site na nkụda mmụọ na mkpebi siri ike, ha ga-agbake wee dịrị njikere maka ọgụ.
Dabere na Inter-American Development Bank (IDB) oria ojoo COVID-19 butere ndakpọ akụ na ụba kacha njọ na Latin America na Caribbean n'ime narị afọ abụọ. Ewezuga ihe isi ike akụ na ụba bụ mmetụta mbibi ọrịa na -efe efe na mpaghara mpaghara yana sistemụ ahụike. Agbanyeghị na mpaghara na -anọchite anya naanị pasent 8 nke ndị bi n'ụwa, ọ kọọla pasent 28 nke ọnwụ niile (atlanticcouncil.org).
Ọbụlagodi tupu oria ojoo a, arụmọrụ akụ na ụba mpaghara ahụ bụ nke kacha njọ n'ụwa na -atụ naanị uto 0.1 na nnukwu ngwaahịa ụlọ (GDP) n'oge 2019. N'etiti 2013 na 2019, uto Latin America na Caribbean GDP ruru 0.8 pasent na mpaghara enwebeghị ike ịzụlite akụ na ụba na -adigide.
Mba dị iche iche kewara ekewa n'ihe banyere ịnweta ngwongwo ọha na nkeonwe, sitere na ohere akụ na ụba na agụmakwụkwọ ruo ahụike yana gburugburu dị ọcha/nchekwa mere njọ site na ọkwa ọrụ adịghị elu, itinye ego nkeonwe dị ala (pasent 16 GDP), ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. mpaghara, nke a na -emetụta imepụta ihe, imepụta ihe na imepụta ọrụ (cepal.org, 2020).
Site na mmechi ọdụ ụgbọ elu na mmachi na njem maka ndị na -azụ ahịa, ndị bịarutere njem nlegharị anya Caribbean dara na pasent 67 na 2020 dị ka data UN si kwuo, IMF kpebiri na ọnụnọ ụlọ nkwari akụ kwa afọ dara pasent 70, na njem ụgbọ mmiri kwụsịrị kpamkpam.
N'agbanyeghị mmemme ịgba ọgwụ mgbochi yana mbelata nke mgbochi mgbochi, mgbake nke Caribbean dị nwayọ na -amanye International Monetary Fund (IMF) iwetula ọnụego uto nke 2021 site na 4.0 ruo 2.4 pasent na mpaghara niile. Enweela opekata mpe ọrịa 38,789,000 na 1,310,000 nwụrụ ọnwụ nke akwụkwọ akụkọ coronavirus na Latin America na Caribbean (graphics.reuters.com). N'ime ọrịa 100 ọ bụla a kọrọ n'ikpeazụ gburugburu ụwa, ihe dị ka mmadụ 26 sitere na mba Latin America na Caribbean. Mpaghara a na -akọpụta otu nde ọrịa ọhụrụ n'ihe dị ka ụbọchị 8 ọ bụla ma kọọ ihe karịrị 38,789,999 kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro.
Mbelata nke ndị njem mere ka ụlọ ọrụ ahụ belata ọrụ - nke, na mpaghara ebe njem na -arụ ọrụ ruru nde 2.8 (ihe dị ka pasent 15 nke ọrụ niile). Nke a bụ nnukwu akụ na ụba. Na mkpokọta, Caribbean tụfuru ihe karịrị nde mmadụ abụọ n'ihi ọrịa na -efe efe (International Labour Organisation), ọtụtụ na mpaghara njem.
Ka mba LAC na -eche ihu coronavirus ọhụrụ n'etiti mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi nwayọ, mgbake ga -esi ike. Nnukwu akụrụngwa emechiela: Na Dominican Republic, ụlọ oriri na ọ Excelụ 400ụ 400 Punta Cana Resort; na Jamaica, Half Moon Hotel Jamaica (50); na St. Kitts, ụlọ ime ụlọ Ocean Terrace nke nwere ọnụ ụlọ XNUMX.
N'aka nke ọzọ, ebe a na -ere akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ yana Resorts Beach emeela ka mgbasa ozi na -aga n'ihu, mepụta usoro ọgwụ mgbochi na nchekwa njem na ụkpụrụ ahụike. Ihe si na ya pụta bụ ọnụọgụ ọnụnọ mara mma n'oge nsogbu a, dabere na ntụkwasị obi ndị ahịa mepụtara site na mkpọsa mgbasa ozi ike.
Ebe ntụrụndụ akpụkpọ ụkwụ na osimiri nwere nkwa ezumike na-enweghị nsogbu ma nwee ike imezu nkwa a ruo ugbu a.
O yighị ka njem nlegharị anya ga -amaliteghachi ruo mgbe mpaghara nchịkwa nje a. Ka ọ dị ugbu a, Healthtù Ahụike Pan American na-achọpụta na mpaghara ụwa “nọ n'etiti ntiwapụ na-akawanye njọ,” nje ahụ na-aga n'ihu na-amali elu na Caribbean ebe ọnụ ọgụgụ ikpe kwa ụbọchị na-arị elu, gọọmentị Caribbean nwere ụgwọ nwere obere ego iji mee ka akụ na ụba ha na-aga n'ihu. .
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica, Edmund Barlett ji anya zuru ụwa ọnụ leba anya n'okwu sara mbara wee were nwe nsogbu a. O kwere ka Jamaica tinye aka na ngwọta wee mee ka olu Caribbean nụ ya n'olu dara ụda. Jamaica ghọrọ ụlọ nke Global Resilience Resilience na Center Management Crisis nwere ngalaba na Malta, Nepal, Kenya, na n'oge na -adịghịkwa Saudi Arabia. Bartlett kwuru eTurboNews, na obi dị ya ụtọ maka nlọghachi na ọnụọgụ mbata ndị ọbịa ugbu a.
Ọnwụ ọrụ na mpaghara njem na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ntorobịa, ụmụ nwanyị na ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ na-eme ka ịda ogbenye na enweghị aha. Enweghị ụdị na nkwado dị iche iche na -egosipụtakwa mmechi azụmahịa na enweghị ego n'etiti ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ebe ntụrụndụ, na mpaghara ndị ọzọ metụtara ọrụ ndị njem (ya bụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ ahịa, ndị na -ahụ maka njem, ndị ọkwọ ụgbọ ala). Site na mbenata ụgbọ elu na esemokwu na -aga n'ihu na mkpebi go/enweghị na mpaghara ụgbọ mmiri, ndị mmekọ ụlọ ọrụ dabere na ndị njem ụgbọ mmiri enweghị ihe mgbapụta ọ bụla ma ọ bụrụ na akagbuo ụgbọ mmiri ahụ kpamkpam ma ọ bụ bugharịa ebe ndị ọzọ.
Mpaghara Caribbean na -adịkarị n'ụgwọ. Ọ bụ ezie na ndị mba ụwa na-ahụ maka ego emepeela obere akpa ego ya iji gboo mkpa mmefu ego ọha na mpaghara, nkwado ahụ bụ mma agha ihu abụọ; E belatala nrụgide ndị dị nso mana ọtụtụ mba na-eche ihe ịma aka ihu ugbu a ka ụkọ mmefu ego na mgbazinye ego na-esiwanye ike ma ọgba aghara ahụ na-aga n'ihu.